ပုံမှန်အသုံးပြုသူများအတွက်မွေ့ရာသည်အမြဲတမ်းပြanနာဖြစ်ခဲ့သည်, ဖြန့်ဖြူးသူ, သို့မဟုတ်ရောင်းချသူ. နှစ်ရှည်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံသည်, သင်နှင့်အတူမျှဝေရန်အကြံပြုချက်များရှိပါသည်. ဤအရာသည်သင်၏မွေ့ရာကိုကြာရှည်စွာထားသင့်သည်.
The storage environment should be in reasonably dry condition to avoid the mold of the suggested humidity of the warehouse is between 50%-55%. စိုထိုင်းဆအထက်ဖြစ်ပါတယ်လျှင် 65%, ပိုးမွှားလျှင်မြန်စွာမျိုးပွားပါလိမ့်မယ်;
Warm temperature is good for microbes to multiply. အပူချိန်မြင့်မားခြင်းသည်ပစ္စည်းအိုမင်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်. ဂိုဒေါင်အေးမြပါ, မွေ့ရာများကိုသိုမှီးထားလျှင်ပိုကောင်းသည်. အကြံပြုထားသည့်အပူချိန်သည်အောက်တွင်ရှိသည် 26 ဒီဂရီ
Suggestions for Exhibition products or showroom renewal: သင်၏ပြသထားသည့်မွေ့ယာနှစ်ခုစလုံးကိုသက်တမ်းတိုးရန်အကြံပြုသည်
When you store the mattresses in the warehouse, ကျေးဇူးပြုပြီးအစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြားချပ်ချပ်ထားပါ, မဟုတ်ရင်, the mattress construction will be damaged by improper storing
Warranty Flat-compression time: မွေ့ရာများ၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြန်တက်ရန်ပြproblemနာကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်, သငျသညျအသီးအသီးအားဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီအားဖြင့် compressed ထုပ်ပိုးဖြန့်ချိရန်အကြံပြုထားသည်, သူတို့ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အာမခံပြားပြားချပ်ချပ်အတွင်းချုံ့ခြင်းကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ:
Foam mattress THREE(3) လများ
PU foam + spring coils SIX(6) လများ THREE (3) လများ
Memory foam / ဂျယ်လ်မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်
/ Latex + spring coils THREE (3) လများ THREE(3) လများ
မွေ့ရာများ၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြန်တက်ရန်ပြproblemနာကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်, သငျသညျအသီးအသီးအားဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီအားဖြင့် compressed ထုပ်ပိုးဖြန့်ချိရန်အကြံပြုထားသည်, သူတို့ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အာမခံ Rolling-compression အချိန်အတွင်းချုံ့ခြင်းကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ:
PU foam + spring coils SIX(6) လများ THREE(3) လများ
d. The above mattress care steps are share based on our long year's experience asaဆိုဖာအိပ်ရာထုတ်လုပ်သူ. I hope it makes sense for your mattress maintenance